Fedora Silverblue: Inonakidza Isingachinjiki Desktop Inoshanda Sisitimu | Kubva kuLinux
Linux Tumira Kuisa | 23/09/2021 06:00 | Yakagadziridzwa ku 23/09/2021 12:17 | Kugoverwa, GNU / Linux
Sekuvimbisa kwatakaita nguva pfupi yapfuura, mune yedu posvo inonzi «Fedora Project: Kuziva Yako Nharaunda uye Izvo Zvazvino Zviitiko«, Nhasi tichaongorora mune imwe yemapurojekiti kana budiriro, inonzi "Fedora Bluesilver".
"Fedora Bluesilver" inotsvaga kuve a Isingachinjiki Inoshanda Sisitimu (isingachinjiki) yemakomputa ayo anofanira kunge ari mashandiro paGNU / Linux uye inofanirwa kushandiswa nenyanzvi, kunyanya vagadziri nevamwe vane hukama neComputer Science, nekuda kwerutsigiro rwayo rwemberi maererano nekushandiswa kwe midziyo.
Fedora Project: Kuziva Yako Nharaunda uye Izvo Zvazvino Zviitiko
Kune avo vanofarira kutsvaga mufaro yapfuura inoenderana posvo game iyo Fedora Project uye zvisikwa zvayo zvakasiyana, unogona kubaya pane iyi link inotevera, mushure mekupedza kuverenga bhuku razvino:
“Iyo Fedora Project ndiweInovandudza, yemahara uye yakavhurika sosi chikuva chehardware, makore uye midziyo inogonesa vanogadzira software uye nhengo dzemunharaunda kuvaka mhinduro dzetsika dzevashandisi vavo. "Mune mamwe mazwi, inharaunda yevanhu vanoshanda pamwechete kuvaka yemahara uye yakavhurika sosi software chikuva, uye kubatana uye kugovana mushandisi-centric mhinduro dzakavakirwa papuratifomu." Fedora Project: Kuziva Yako Nharaunda uye Izvo Zvazvino Zviitiko
1 Fedora Silverblue: Yakanakira kumidziyo-yakatarisana nemabasa ekuyerera
1.1 Chii chinonzi Fedora Silverblue?
1.3 Kukoshesa wega
Fedora Silverblue: Yakanakira kumidziyo-yakatarisana nemabasa ekuyerera
Chii chinonzi Fedora Silverblue?
Mune yapfuura kutumira nezve iyo "Fedora Chirongwa", tinotaura muchidimbu kuti "Fedora Bluesilver" es:
"Iyo isingachinjiki (isingachinjiki) desktop Inoshanda Sisitimu inoitirwa kupa rutsigiro rwakanaka rwecontain-centric workflows. Izvi zvakasiyana zveFedora Workstation zvinangwa zvekuvandudza nharaunda."
Nekudaro, kunyangwe iri hunhu hwekusachinja, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ichokwadi:
"Musiyano weFedora Workstation. Uye saka inotaridzika, inonzwa, uye inoita senge yakajairwa desktop desktop inoshanda, uye chiitiko chakafanana neicho chinowanikwa uchishandisa yakajairwa Fedora workstation."
Uye kujekesa izvozvo, kana uchitaura nezve kusachinja kwe "Fedora Bluesilver" chirevo chinoitwa ku:
"Kuisirwa kwega kwega kweFedora Silverblue kwakafanana kune kumwe kumisikidza kweshanduro imwechete. Iyo Inoshanda Sisitimu iri pane diski yakanyatso fanika kubva kune mumwe muchina uchienda kune mumwe, uye haambochinje painenge ichishandiswa."
Pakati pezvakakurumbira maitiro isu tinogona kutaura zvinotevera:
Dhizaini isingachinjiki yekuwedzera kugadzikana, kushomeka kwekukanganisa kunoitika. Uye saka zviri nyore kuyedza uye kukudziridza.
Iyo yakanakisa chikuva chemidziyo yekushandisa, pamwe nemidziyo-yakavakirwa software kuvandudza.
Maapplication ako (maapplication) nemidziyo zvinochengetwa zvakaparadzana kubva kune inomiririra system, kugadzirisa kugadzikana uye kuvimbika.
Kugadziridza kwavo kuri kukurumidza uye hapana chekumirira kuti vaise. Kutangazve zvakajairika zvakakwana kuti unakirwe neinotevera vhezheni vhezheni kana kuti udzokere kune yakapfuura vhezheni yacho, kana zvichidikanwa.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve "Fedora Bluesilver" unogona kushanyira yako kurodha chikamu nezvake "Fedora Chirongwa". Uye nezve ake mukuru mukuru chikamu In inotevera link. Iko kune zvakawanda zvinyorwa zviripo kunyanya pakuiswa uye kushandiswa kwayo. Uye nezve iyo ruzivo rwehunyanzvi iyo yainoita nayo isingachinjiki uye yakashandiswa tekinoroji Toolbox iyo inobata nayo kushandiswa kwemidziyo, kuitira kuti ibudirire kunzwisiswa kwepasirese uye kwakadzama kwekusimudzira kwakataurwa.
Zvirokwazvo, "Fedora Bluesilver" chisikwa chikuru cheavo vashandisi vanogara vachida gadzira / gadza / chinja / bvunzo kunyorera uye masisitimu pane yako Inoshanda Sisitimu. Sezvo, kugona kugara uchiita zviito zvakadaro pasina kutya kana kuva nehanya nazvo kuchinja zvakanyanya kana kukuvadza iyo Inoshanda Sisitimu yakashandiswa, ichokwadi inokosha zvikuru kana zvasvika kubasa kana mabasa akakosha.
Y "Fedora Bluesilver" zvinoita kuti ndifunge zvakawanda, nezve Inopindura (Rarama uye Inogoneka Snapshots) yakagadzirwa neimwe GNU / Linux Distros senge MX o AntiX.
MX Snapshot: Ungagadzira sei wega uye inogadzirika MX Linux Pindura?
Sezvo, zvirinani maererano nekuisirwa, mhedzisiro yekumisikidza Respin inogara yakafanana. Ndokunge, iyo chaiyo kopi yeyakagadzirwa system. Uye kunyangwe ivo vasingachinjiki, ivo vanobvumidza kumisikidza nekukurumidza kubva kuIO inogadzirwa mumufananidzo uye yakafanana neOinating System. Kubvumira kuve nayo kana kuidzosera sezvatinogara tichida kuishandisa.
Muchidimbu, "Fedora Bluesilver" parizvino ndechimwe chezvinhu zvinonakidza zvisikwa zve "Fedora Chirongwa". Sezvo, inotsvaga kuve yakanyanyisa yakatsiga uye yakavimbika Chemhondoro Basa Rinoshanda Sisitimu, kunyanya kune avo nyanzvi vatadzi, uye kune avo vanoshandisa mafashama emvura anotariswa midziyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Fedora Silverblue: Inonakidza Isingachinjiki Desktop Inoshanda Sisitimu
Paul Cormier CEO Red Hat, Inc. akadaro
Ini ndiri weSilverblue mushandisi uye zvirokwazvo, haina kuita sekushandisa yakajairwa distro. Nzira yekuitarisira inosiyana zvachose uye ini ndinofunga Silverblue iro ramangwana re linux distros;
Ndatenda nechinyorwa chino chakanyatsotsanangurwa
Pindura kuna Paul Cormier CEO Red Hat, Inc.
Kwaziso, Paul. Ndatenda nekutaura kwako uye ndinofara chaizvo kuti wakazvifarira. Ini handina kukwanisa kuitisa kuti ishande muMV, kuti ndiedze zvekare. Ini ndinofungidzira kuti haishande paMV, handiti?
Mhoroi, ini handisati ndamboiisa muMV. Ndine pc dzinoverengeka uye mune imwe ndine sirivhuru ...
Kunyangwe kana ndikaverenga nezvematambudziko nemichina chaiyo, ini handizive kana iwe uchida kuigadzira mumabhokisi, asi pano paYeTuBe munhu anoisa silverblue uye anoita kuti ishande, handizive kana iwe uchida kutarisa uye ona kana zvichikushandira: https://www.youtube.com/watch?v=AeNKlIizUFc
Kwaziso kubva kuColombia
Kwaziso, Paul. Ndatenda nekomendi yako uye mupiro. Edza zvakare neVirtualBox uchiteedzera rairo muvhidhiyo uye hapana. Ipapo ndichaedza Mabhokisi.
Ubuntu Touch OTA-19 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo